Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitsarana Tampony: Nankalaza ny faha 56 taona niorenany
Fitsarana Tampony: Nankalaza ny faha 56 taona niorenany
Ny fitsarana tampony no ahitana ny fitsarana fandravana, ny fitsarana ny volam-panjakana ary ny fitsarana amin’ny ady amin’ny fanjakana.
Nankalazana tetsy Anosy ny faha 56 taona niorenan’ity rafi-pitsarana ity omaly talata faha 19 desambra 2017. Nisy koa ny fitokanana ny tao amin’ny tribonaly ambaratonga voalohany ny fikarakarana ny “état civil” na ny sora-piankohonana. Misy koa ny fitokanana iray hafa dia ny “logiciel” fampiasa amin’ny solosaina, izay hanarahana ny ady atao amin’ny fanjakana.
Natsoina tamin’ity fankalazana ity ny sampana fitsarana any amin’ny faritany rehetra. Nanao fampiratiana ho fampahafatarina ny zava misy any amin’ireo toerana ireo ny mpiasa ny fitsarana any an-toerana niampy ny teto Antananarivo. Nahagaga nefa fa tsy nasian’ny filohan’ny repoblika Hery Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly topi-maso akory izy ireny, ka nalahelo ireo mpiasa nanao izany. Io fotoana io hoy ireto mpiasa ireto no fotoana tokony hampahafantaranay ny zava-misy any amin’ny faritany.
Mbola mitohy androany alarobia izany fampirantiana izany ka tsara raha hitan’ny be sy ny maro fa manampy azy amin’ny fahalalana ny tokony ho fantatra amin’ny fitsarana izany.